Difaacayaasha Premier League ee City oo Guul ku furtay Horyaalka xili Casharka guuldarada loo Bilaabay Leyliyaha Arsenal Unai Emery+SAWIRRO – Gool FM
Difaacayaasha Premier League ee City oo Guul ku furtay Horyaalka xili Casharka guuldarada loo Bilaabay Leyliyaha Arsenal Unai Emery+SAWIRRO
( Premier League ) 12 Agoosto 2018. Manchester City ayaa ku dhibtoon in ay guul ka gaarto kooxda Arsenal oo ay ugu martoyeen garoonka Emirates markii ay kaga badiyeen 2-0.
Kulanka ayaa lagu kala maray qeybta hore 1-0 oo ay ku hogaamineysay kooxda Manchester City, waxaana goolka u gaaray Laacibka Raheem Sterling markii uu darbad xoogan dhex dhigay goolka Arsenal ka hor inta uusan soo dhex jeexin dhawr cayaariyahan oo kooxda Gunners ah.
Ka hor goolka Sterling ayaa laga badbaadiyay fursad halis ahyed markii uu caawin fiican ka helay laacibka Kun Aguero.
Saxiixa cusub ee kooxda City Riyad Mahrez ayaa dhankiisa ku sigtay inuu gool dhaliyo balse goolhaye Petr Cech ayaa si wacan kaga badbaadiyay fursadaas.
Kooxda Arsenal ayaa dhankeeda jaanis barbaro ah heshay dhamaadka qeybta kowaad laakiin dhaliyaha kasoo jeeda dalka Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lumiyay fursada kaliya ee soo martay kooxda waqooyiga London.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe Man City ayaa sii waday cadaadiska ay ku hayaan goolka Arsenal fursad soo martay daqiiqadii horena waxaa meel sare oo goolkaa marsiiyay Sergio Aguero.
Fursadii ugu wanaag saneed ayaa soo martay Arsenal daqiiqadii 55-aad markii kubbad weerar celis ah uu banaanka goolka marsiiyay Alexandre Lacazette oo markaa badal kusoo galay.
Kubbad weerar celis ah oo ay City ku dheereysan kartay hogaanka kulanka ayaa waxaa ka qasaariyay weeraryahankooda Aguero oo isaga iyo goolhaye kubbad ku helay balse Cech ayaa si taxadar leh kaga badbaadiyay furadaas laacibka Argentina
Laakiin daqiiqad kaddib City ayaa heshay goolka labaad markii kubbad uu kasoo shaqeeyay daafaca Mendy una dhiibay Sterling kasoo baas banaan usoo dhigay Bernando Silva laacibka Portugal ayaa darbad xoogan dhanka sare goolka ku hubsaday hogaankana ka dhigay 2-0.
Arsenal ayaa laga diiday gool garab dhaaf ah markii Kubbad qurux badan uu Torreira u dhigay laacibka Aubameyang daqiiqadii dambe ee dheesha.
Mar kale guuners ayaa laga diiday gool uu dhaliyay Mesut Ozil markii uu laacibka jermalkaa uu kubbad fiican ka helay diilnta goolka City.
Waxayna ugu Damebyn City ugu awood sheegatay dhigooda Arsenal 2-0 kulankii ku dhexmaray garoonka Emirates.
DAAWO: Cristinao Ronaldo oo Furtay Koontadiisa GOOLASHA Juventus+SAWIRRO